राजनीतिको व्यवस्थित व्यवस्थापन र युवाको भूमिका – सुनौलो अनलाइन
प्रचण्ड अक्सिजन सिलिण्डर चीन कोरोना संक्रमण कोरोना विश्वासको मत सुदूरपश्चिम प्रदेश गिट्टी
राजनीतिको व्यवस्थित व्यवस्थापन र युवाको भूमिका
सुजन काफ्ले५ असार २०७८, शनिबार १६:३५
अन्जु पाण्डे ।
जीवनमा ती ब्यक्तिहरुलाई सबैभन्दा धेरै संकट आउँछ, जुन व्यक्तिहरु श्रृजनात्मक र क्रान्तिकारी हुन्छन् । तर तीनै व्यक्तिहरु लाई नै हरेक संकटले नयाँ उर्जा दिएर जान्छ र अझ बलियो बनाउँछ । मान्छेको जिन्दगीमा आउने हरेक संकटहरुमा उर्जा पनि हुन्छ । राजनीति एउटा चेतना हो । मानव समाज र राजनीतिबिच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । प्रत्येक मानवीय चेतनालाई राजनीतिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै न कुनै किसिमको प्रभाव पारेको हुन्छ । राजनीतिले कस्लाइ कस्तो प्रभाव पार्दछ ? यो विषय उसको विवेकमा भरपर्छ । समाजका हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिले फरक–फरक प्रभाव पारेको हुन्छ ।
एउटा कुशल नेता त्यो हो, जस्ले आउने पुस्ताको नेतृत्व पनि कुशल जन्माउन सक्छ । हामीले कुनैपनि काम किन र के का लागि भनेर पहिले नै निर्धारण गर्न सकेनौं भने गन्तव्यले गलत दिशा लिनसक्छ । अरुले के गर्यो ? के गर्छ ? भन्दापनि मैले के गर्ने ? भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै कुराको क्षमता (खुबी) हुन्छ । तर, आफूभित्रको आफूलाई चिन्न सक्नु पर्छ । राजनीतिले हरेक मानवलाई दुईखाले बाटो मा डोहोर्‍याउँछ सत्मार्ग र कुमार्ग । असल मान्छेको पहिचान गरेर अनुशरण गर्नेहरुलाई सत्मार्गमा पुर्‍याउँछ भने खरावमान्छेको अनुशरण गरेर हिड्नेहरुलाई कुमार्गमा पुर्‍याउँछ । कुन बाटो रोज्ने निर्णय स्वयम्ले लिनुपर्छ ।
अरुले के गर्यो ? के गर्छ ? भन्दापनि मैले के गर्ने ? भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै कुराको क्षमता (खुबी) हुन्छ । तर, आफूभित्रको आफूलाई चिन्न सक्नु पर्छ ।
यहाँ विषयको उठान यसरी गर्न खोजिएको छ कि, पछिल्लो समय देखिएको राजनीति उतारचढाव र यसमा युवापुस्ताले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिका । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको हाम्रो नेपाल हरेक क्षेत्रका विकासमा दशकौं पछाडि परिरह्यो । साझा मुद्धाहरुमा पनि राजनीतिक शक्तिहरु ध्रुविकृत भइरहँदा राज्यसत्ता नौ नौ महिनामा फेरिरहने मात्र नभइ अनेकन उतारचढावहरु हामीले देख्यौं । क्रमशः समयले सवै राजनीतिक दलहरुलाई एकठाउँमा उभ्यायो । सवै युवापुस्ताको अजेण्डा एकत्रित हुन पुग्यो । फलत : मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि पनि स्थायी सरकार बन्न केहि समय लाग्यो । बल्लबल्ल ५ वर्षका लागि जनताको म्याण्डेड लिएर बनेको वर्तमान सरकार पनि अहिले ढल्छ कि भरे ढल्छ भन्ने स्थितीमा पुगेको हामी सवैलाई विधित नै छ ।
राजनीतिमा देखिएको यस्ता बिकृती, अझ भनौं नेपालको राजनीति इतिहासमा बर्सौंदेखि चलिआएका सत्ता परिवर्तनका खेलहरु पुनः देखिएका छन् । सत्तामोहकै कारण जोडघटाउ र भागबण्डा कायमै छ । हिजो नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्था नहुँदा जस्ता राजनीति खेलहरु भए अहिले पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएका छन् । मुलुकमा व्यवस्था पविर्तन त भयो, तर राजनीतिभित्रको खिंचातानी दलबदल सत्तापरिवर्तनका खेल उस्तै छन् । यस्ता बिकृतीका विरुद्ध युवाहरुको धारणा साझा हुन आवश्यक छ जुन हुन सकेको छैन ।
हिजो आफैले भूमिका निर्वाह गरिदिएर सृजना गरेको वातावरण (राजनीति स्थायीत्व र स्थिर सरकार ) का लागि युवाहरुको खबरदारी हुनुपर्ने थियो । त्यसको विपरीत अहिले तिनै युवाहरु विभिन्न पक्ष विपक्षमा लागेर बिरोधका लागि बिरोध गर्ने, एकले अर्कोको विचारको सम्मान नगर्ने, विभिन्न झुण्डमा बिभाजित भएर सत्तापरिवर्तनकै खेल मलजल गर्ने काममा लागेका छौं । यसले अस्वस्थ राजनीतिलाई बाहेक केहि व्यक्तिका लागि क्षणीक लाभ होला त्यसको सिवाय अरु के नै होला र ? यस्तै भूमिकाको कारण राजनीतिको जिम्मेवार ठाँउमा युवाहरु लाई अझै बिश्वास गर्न सक्ने स्थिति समेत बन्न सकेको छैन । जबसम्म यस्ता बिकृती विरुद्ध युवाहरु एक हुदैनन् तबसम्म यस्ता राजनीति बिकृतीबाट मुलुकले छुटकारा पाउन सक्दैन ।
अहिले प्रविधिको विकास यसरी भएको छ कि विश्व एउटा घरमा परिणत भएको छ । त्यसैले हामीले सहजै विश्वलाई पनि नियाल्न सक्छौं । विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने अधिकांश विकसित देशहरुमा राजनीति–आर्थिक–सामाजिक सबै क्षेत्रको व्यवस्थित विकास भइसकेको छ । लाग्छ त्यहाँ कुनै प्रकारका राजनीति बिकृतीहरु छैनन् । त्यसैले त राजनीतिमा लाग्ने युवाहरुले सर्वोच्च तहको नेतृत्व समेत गर्न सफल भएका छन् । त्यहाँ नविनतम् सोंच छ । विकास उसैगरि भएको छ । अर्को तर्फ जुन मुलुकमा राजनीति बिकृती चरम हुन्छ, त्यहाँ कुनैपनि व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकलाई सुव्यवस्थित सुशासन र स्वाभिमानसहितको समृद्धि तर्फ अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले युवाहरुको राजनीति चेतलाई सहि दिशा दिन सक्नुपर्छ । कुनैपनि देशकालागि युवा भनेका अमुल्य सम्पत्ति हुन् । त्यो ज्ञात गराउन आवश्यक छ ।
युवाहरुमा भएको जोस जाँगर र चेतनालाई मुलुकले जति धेरै सदुपयोग गर्छ देशको समृद्धि त्यति नै चाँडो सम्भव छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको कुरा गर्ने हो भने समृद्धिका अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अझै गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । आखिर किन त ? देशमा शासकीय व्यवस्थामा त परिवर्तन गरियो तर, राजनीतिको व्यवस्थित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समस्या यहाँ छ कि देशका उर्जाशिल युवाहरु विश्वका विभिन्न देशहरुमा न्यून पारिश्रमिकमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालमै रहेका राजनीति–सामाजिक चेत भएका युवाहरु पनि कुनै न कुनै राजनीति स्वार्थमा प्रयोग भइरहेका छ्न् । राजनीति चेतना भएका युवाहरुको आवाजलाई कुनै न कुनै तवरबाट लगाम लगाइने गरिन्छ । जुन प्रष्ट छ । यी र यस्तै कारणले पनि नेपाली राजनीतिको व्यवस्थित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको राजनीति इतिहास हेर्ने हो भने युवाहरुका चेतनाले भरिएका आवाजले नै अहिलेसम्म ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु सम्भव भएका हुन् । म एक विद्यार्थी युवा भएकै कारण आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै छु । हिजोका दिनमा सबै दल, भूगोल र सम्प्रदायका युवाहरुका आवाज एक थिए । अनि मात्रै क्रान्ति सफल भएको थियो । फेरि पनि एक पटक नेपाली समाजका राजनीति सामाजिक चेतना भएका युवाहरु राजनीति र दलगत स्वार्थलाई त्यागेर नितान्त सामाजिक स्वार्थ र आउने पुस्ताको भविष्य सम्झेर राजनीति बिकृतीका विरुद्ध एक हुन जरुरी छ । सत्ता समिकरणकै लागि गरिरहने राजनीतिक खेललाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
युवाहरु अझै राजनीति बिकृतीको दलदलमा रमाउँदै जाने हो भने, आउने पुस्ता त के ? पुस्तौं–पुस्तासम्म पनि सुशासन र समृद्धिको सपनाहरु केवल सपनामा नै सिमित हुने निश्चित छ । नेपालमा अहिले दुई प्रकारका युवाहरुको धेरै चर्चा हुने गरेको छ । एउटा राजनीति दलमा आबद्ध र अर्को स्वतन्त्र युवा । राजनीति दलमा आबद्ध युवाहरु धेरै कुरामा सचेत देखिन्छन् । उनीहरुमा राजनीति– सामाजिक चेतना पनि देखिन्छ । तर, राजनीति भित्रका बिकृतीका बारेमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ती दिन त परै जाओस गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्न सक्दैनन् । किनकि राजनीति दलले उनीहरुलाई लगाम लगाएको हुन्छ ।
यस्तै चर्चा रहने अर्को पंक्ति हो स्वतन्त्र युवाहरुको । तर तिनमा पनि एउटै ध्यान देखिन्छ, कसरी हुन्छ चर्चित हुन पर्‍यो । चर्चित हुनलाई जे गर्नपरे गर्ने । अझ भनौं जस्तोसुकै हत्कन्डा अपनाउन पछी नपर्ने । स्वतन्त्र भित्रै पनि आफूलाई बौद्धिक स्वतन्त्र भन्ने युवाहरुको समूह पनि देखिन्छ । उनीहरुको भूमिका पनि सकारात्मक उर्जा भर्ने नभई केवल नकरात्मकता मात्रै उजागर गर्ने देखिन्छ । उनीहरु जताततै नकारात्मक बिचार मात्रै राख्छ्न । नकारात्मक धारणा मात्रै बनाउछ्न र समाजलाई हतोत्साही बनाउन तल्लिन देखिन्छन् ।
युवापुस्तालाई यस्तो बनाइयो कि आफूभित्रको क्षमतालाई चिन्न नसक्ने । राम्रो लाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्ने । नेतृत्वले गरेका सवै काम राम्रो मात्र देख्ने बनाइयो ।
आखिर यी सवैखालका बिचार र व्यवहार हुनुमा केवल युवाको दोष भने पक्कै होइन । यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुले समाजलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नीतिकै परिणाम हो । युवापुस्तालाई यस्तो बनाइयो कि आफूभित्रको क्षमतालाई चिन्न नसक्ने । राम्रो लाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्ने । नेतृत्वले गरेका सवै काम राम्रो मात्र देख्ने बनाइयो । जसको कारण अहिलेको राजनीति संस्कारलाई मलजल गरिरहेको छ । यो दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो ।
यस्ता बिकृतीले भरिपूर्ण राजनीति संस्कारलाई बदल्नु छ भने युवाहरु आफू बदलिनु जरुरी छ । किनभने तपाईं जतिसुकै संसार बदल्ने कुरा गर्नुस न, तपाईंले आफूले चाहेको क्रान्तिमा आफूलाई ढाल्न सक्नुभएन भने परिवर्तन एक सपना मात्रै हो । अहिले युवाहरुमा ठूलो समस्या यहाँ छ कि हामी अरुको मात्रै कमजोरी देख्छौ । आफ्नो कमजोरी केहो ? मेरो समस्या कहाँ छ ? त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जादैन । यो युवा माझमा निकै जटिल समस्या हो । जबसम्म युवाहरुले राजनीतिमा आफ्नो निजी भविष्य खोज्छन्, तबसम्म राजनीति बिकृतीहरु बढिरहन्छ्न् । मेरो राजनीति उपस्थिति के र कस्का लागि भन्ने कुराको निर्धारण युवा आफैले गर्नुपर्छ । युवाहरु समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीति भित्रका बिकृतीका विरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिकामा युवाहरु हुनुपर्छ ।
जबसम्म युवाहरुले राजनीतिमा आफ्नो निजी भविष्य खोज्छन्, तबसम्म राजनीति बिकृतीहरु बढिरहन्छ्न् । मेरो राजनीति उपस्थिति के र कस्का लागि भन्ने कुराको निर्धारण युवा आफैले गर्नुपर्छ । युवाहरु समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । राजनीति भित्रका बिकृतीका विरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिकामा युवाहरु हुनुपर्छ ।
सामाजिक राजनीति आर्थिक बिकृतीलाई हटाउनका लागि ती युवाबाट मात्रै सम्भव छ, जुन युवामा राजनीति चेतना छ । सकारात्मक उर्जा छ । ती युवाबाट मात्रै अहिलेको सामाजिक उदण्डता रोक्न सम्भव छ । अहिले मुलुकको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको समृद्धि र सुशासन हो । जसले स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई थप उचाईमा पुर्‍याउँछ । यी कुरा हासिल गर्नका लागि युवाहरुले पदीय लोभ, निजी भविष्यजस्ता कुराहरुलाई त्याग्न जरुरी छ । समृद्धिको भिजन बोकेका व्यक्तिलाई राजनीतिमा स्थापित गराउँदै जानुपर्छ । कुनैपनी राजनीति दलका एजेन्डा जनताका हितमा छन् या छैनन ? जनताका चाहाना अनुसारका छन् कि छैनन् ? त्यतापट्टि सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अझै पनि राजनीति चेतना भएका युवाहरु राजनीति बिकृतीका विरुद्ध एक भएर आवाज नउठाउने हो भने मुलुकमा ठूलो अराजकता निम्तिन सक्छ ।
सेवाकेन्द्र ब्यवस्थापन मानव संशाधन क्षमता अभिबृद्धि र कार्ययोजना निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न
जिल्ला कमिटी सदस्यमा लोकप्रिय युवा नेता शान्त जिरेलको उम्मेदवारी, को हुन जिरेल ?
एमाले दोलखाको उपाध्यक्षको दौडमा लोकप्रिय नेता कृष्ण बस्नेत
एमाले दोलखाको उपसचिवमा युवा नेता कार्कीको उम्मेदवारी ,को हुन सुन्दर कार्की
जिल्ला कमिटी सदस्यमा युवा नेता श्यामसुन्दर शिवाकोटिको उम्मेदवारी
२५ पुष २०७८, आईतवार ०३:१२
२४ पुष २०७८, शनिबार २०:२७
२४ पुष २०७८, शनिबार १९:५०
नेकपा एमाले दोलखाको उपसचिवमा युवा नेता केशव चौलागाईंको दाबि
२३ पुष २०७८, शुक्रबार १३:५५
दोलखा एमालेको जिल्ला उपसचिवको दौडमा युवानेता रेशमराजस्वराज रिमाल
२२ पुष २०७८, बिहीबार २१:०५
एमाले दोलखाको जिल्ला कमिटीमा एक दर्जन युवाहरु आकाँक्षी
२२ पुष २०७८, बिहीबार २०:५३
प्रकाशक: बुढिदेवी मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभाग दर्ता नंः २७८१/०७८-०७९
प्रधान सम्पादक : सुजन काफ्ले
संचालक : सुजन काफ्ले
निर्देशक : इश्वर न्यौपाने
© Copyright 2022 | All Rights Reserved | Develop By: HostMero